Zvinotangira kuisa mari yako | Ehupfumi Zvemari
Zvinotangira kuisa mari yako
Icho chokwadi chekuti iwe unogona kuita chimwe chinhu hazvireve kuti chiite izvozvi. Uye zvakatonyanya kana iwe uchibhejera nemari yako, sekudyara. Kana paine mabasa mazhinji anofanira kuitwa uye nguva inenge yakamanikana, haufanire kuita chero chinhu kunze kwekutarisira kuzadzikiswa kweako zvinangwa yakanyanya kudzvanya mune yekudyara nyika. Ichokwadi kuti zvikamu zvese muhurongwa hwekudyara hazvina kukosha zvakafanana. Kuongorora masheya pamusika wemasheya hakuna kufanana nekusarudza kuzviita panguva yakatarwa.
Nekudaro, iyo "yekutanga zvinhu kutanga" theme ndiyo musimboti weakanaka nguva yekushandisa nemudyari. Kuremerwa nekusaririra kwemabasa uye kushomeka kwekuwanika kwenguva yekuzviita, mukumhanya-mhanya kwezuva, kunyangwe avo vanoziva kushandisa zvakanaka nguva yavo dzimwe nguva vanonzwa kushushikana pamoyo zvekuti vanozoita kumamiriro ezvinhu ane kumanikidza kukuru. Izvi zvakajairika mukushanda kwemusika wemari sezvaungave uchiziva kubva pane chako chiitiko.
Izvo zvakare zvinokwanisika kuti kana uchitarisira mari yako unonzwa uchimanikidzwa nechimwe chezviitiko zvinotevera. Gadzirisa matambudziko nenzira yavanounzwa, ita mabasa akareruka kana sarudzo dzekutanga zvese kana kungo tarisa mabasa akaoma, uine pfungwa yekuti inokurumidza uye yakanangana nzira yekuvabvisa. Chero zvazvingaitika, unenge usina imwe mhinduro kunze kwekutsanangudza zano raunoda kugadzira kubva zvino zvichienda mberi. Kwete pasina, kubudirira kwekushanda pamusika wemasheya kana imwe nhumbi yemari zvinoenderana navo.
1 Mari: kurongedza maitiro
2 Maitiro ekuisa mari?
3 Mikana yebhizimisi
4 Tanga nemari
5 Tsvaga zvinangwa zvakavimbika
6 Gadzira chirongwa chekudyara
Mari: kurongedza maitiro
Kunyangwe iwe uchinzwa uchinzwa kuda kuzvitenderedza mune imwe yeaya maratidziro, zvidzivise zvachose. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti iwe unogona kuita yakaipa mari. Kugadzirisa matambudziko muhurongwa hwazvinoitika kungave kwakakodzera mune mamwe mamiriro. Semuenzaniso, kuona kuti ndeipi mari iwe yaunofanirwa kushandisa nguva dzese. Izvi zvakafananawo nechero ipi nzira yekusaona nemamiriro ezvinhu, zvisinei nemhedzisiro yechiito chako. Unofanira kufunga izvozvo unogona kusiya ma euro akawanda munzira Uye ichi chinhu chaunofanirwa kudzivirira pamusoro pedzimwe nzira dzekudyara.
Inotevera nguva iwe yaunofunga kuti hauna nguva yakakwana yekuzvipira kuisa mari, iwe uchafanirwa kuratidza zvakare. Mukupedzisira, iwe unogona kuona kuti une iyo nguva yaunoda, asi chete kana iwe uine ushingi hwakaringana hwekuita pamwe sarudzo dzakaoma.
Kune izvi unofanirwa kufunga nezve zvinotevera zvinhu.
Enzanisa chii iwe unoda kuita nezvamunotoita izvozvi.
Zvibvunze marii yaunowana mune imwe nyaya uye mune imwe.
Pindura kune chokwadi nezve yakawanda sei kurasikirwa nekusaita oparesheni mumisika yemari.
Inofunga sarudzo dzese dzauinadzo kusvikira zvino.
Maitiro ekuisa mari?
Mhedzisiro yekupedzisira ichave irwo runyorwa rwezvinhu zvekutanga izvo zvinokuudza zvekutanga kutanga, zvekuita wechipiri, zvichingodaro kusvika kumagumo, kuitira kuti uve nechokwadi chekuti mari yako yekutengesa yakanyanya uye kurasikirwa kwako kushoma. Nzira yakanakisa yekuenderera ndeye ongorora mamiriro acho ezvinhu kuitira kuti iwe utarise zvese zvakagadziriswa zvezviito zvako munyika yekudyara. Naizvozvo usati waisa kana kuchinja zvaunokoshesa, unofanirwa kufunga zvinotevera:
Usatore kana kushandura chiito ndisina kuita sarudzo kuziva kuita saizvozvo. Usatore nhanho usati wanyatso kuzvibvunza iwe kana iwe usina chimwe chinhu chakakosha kubata. Usaite chero chinhu kunze kwetsika, kunze kwekungogara uchitarisa zvaunokoshesa kuti uone kuti zvaunofunga zvichiri kushanda.
Tarisa zvakanyanya kune izvo zvido zveaunogona kukufarira kana kukukuvadza. Mupfungwa iyi, zvakakosha kuti iwe ugovimba chete nevanhu vane ruzivo rwakawanda munyika yekudyara.
Kuzvibata semutungamiri, kwete sekopi. Kusarudza zvekutanga zvekudyara inongova dambudziko chairo kana chimwe chezvinangwa zvako chikabondera chimwe. Apa ndipo panokosha hupfumi manejimendi.
Kune rimwe divi, iwe unofanirwa kutanga waita pamikana yebhizinesi inogona kubuda nguva dzese. Ivo havafanirwe kubva kumusika wemasheya, asi vanogona kunge vachibva kune zvimwe zviwanikwa zvemari, kunyangwe zvimwe zve izvo zvawanga usina kumbofunga nezvazvo kusvika zvino. Iwe unofanirwawo sarudza mari yakawanda uye zvirinani kurasikirwa, sezvatambotaura kare. Mupfungwa iyi, uku ndiko kukosha kwesarudzo yezvinokosha. Kubva pane ichi chokwadi, tanga waita icho icho kuteedzera chinounza bhenefiti rakakura uye siya kune kumagumo icho chinononoka uye chinokonzeresa kushoma kurasikirwa.
Siyanisa zvinhu zviri mubhizimusi zvaunofanira kuita uye neyaunonzwa uchisungirwa kuita kana kuda kuita. Kana iwe uchifanira kusarudza pakati pesarudzo dzinoverengeka kuti uite, tanga waongorora yega yega kuti uone kuti ndeipi inokodzera muchikamu cheizvo zvaunofanira kuita panguva imwe neimwe. Zvichida unonetseka kusarudza zvaunokoshesa chete pahwaro uhwu, asi hazvifanirwe kuganhurirwa kune izvi. Usakanganwa kuti kutarisisa hupfumi hwako zvinonyanya kukosha kuti iwe uve nezvimwe zvekutanga pamusoro pevamwe. Iyo ndeimwe yemakiyi ekubudirira mune chero mudiki uye wepakati investor.
Ehezve, zvichave zvakafanira kuti iwe usimbise chimiro chako sevatengesi vevatengesi. Kuti izvi zvigoitika, hapazovi nesarudzo kunze kwekutevedzera akateedzana maitiro seaya atichafumura pazasi.
Iva ne kudzidza kwakakosha mune yega yezvigadzirwa zvemari kwauri kuzotora zvinzvimbo kubva zvino zvichienda mberi.
Haufanire kudaro investa nechisungo, asi nekuti mamiriro emisika yemari inoratidza kudaro.
Iwe unofanirwa kuve nemhosva kune yega yega sarudzo dzaunotora uye nekuda kwechikonzero ichi basa rako rinenge rakanyanya kukwirira. Iwe haugone kukanganwa kuti nemari haufanire kubheja nekuti unogona kurasikirwa nechakakosha chikamu chemuchato wako uyu.
Zvinoshanda kwazvo kuti iwe uve nezvose zviwanikwa uye zvinotsigira kuti zvishande mumisika yemari. Dzimwe dzadzo dzinogona kupihwa kwauri kubva kubhangi rako remazuva ese uye dzinogona kukubatsira iwe kushambadzira chero rudzi rwemari mukudyara mumisika yemari.
Tsvaga zvinangwa zvakavimbika
Izvo zviri nani iwe kuziva iwe zvaunofanira kuita uye zvaunotarisira kubva kune investment, zvirinani zvichave zviri zvako zvaunofarira. Ukangopihwa basa idzva mubato rekudyara, chako chakanyanya kukosha kukumbira rondedzero yakajeka yezvinangwa zvinotevera. Pakati pazvo zvinotevera zvinoratidzira kuti tinonongedza iwe mune iyi ruzivo:
Tora iyo zvinotarisirwa mhedzisiro kubva pakutanga, kupfuura dzimwe nzira dzine hukasha dzekudyara. Iwe haufanire kufunga zvakanakira mhedzisiro nekuti pakupedzisira zvinogona kuitika kuti hazvina kusangana. Uye kuora mwoyo kunogadzikana mune yako mamiriro epfungwa semudiki uye wepakati investor iwe zvauri.
Wongorora nguva yaunofanirwa kuita yekudyara nekuti ichave yakakosha kwazviri ita sarudzo yakanaka pane izvo zvaunofanirwa kuita mumisika yemari. Kune rimwe divi, bhajeti yauinayo yekuita mashandiro aya mumisika yemari. Kuti uzopedzisira waziva kuti kuvhiya kutsva pamusika wemasheya kunoreva shanduko muhurongwa hwekudyara uye zvakakonzera zvakanyanya.
Gadzira chirongwa chekudyara
Chinotevera chako chekutanga kuronga chirongwa chinotenderedza mashandiro ako mumisika yezvemari. Pakutanga izvi zvinokutorera nguva, asi pamusoro pezvose iwe unodzivirira chero mhando yekuvhiringidzika uye iwe uchachengetedza nguva gare gare, nekuti iwe unenge uine vimbiso izere yekuti zvese zvako zvekudyara zvakarongedzwa nenzira kwayo uye zvakagadzirwa. Beyond zvikanganiso zvaunogona kuita nguva dzose. Chimwe chinhu icho kune rimwe divi chinoitika nehumwe huwandu hwakawanda sezvaunoziva iwe pachako kubva pane chiitiko chakawanikwa kuburikidza nemakore mazhinji seanodyara mari.
Hazvishamisi kuti chimwe chezvinangwa zvako zvikuru hachisisiri chete kuwana purofiti yakawanda. Kana zvisiri, pane kudaro, inotarisa pakupa kudzivirirwa kukuru kwekuita kwako kwemari. Chero zvingave zvakaita uye huwandu hwawakatsaurira kune izvi zvinzvimbo mumisika yemari. Nekuti pakupera kwezuva icho chiri nezve kukwidziridza yako wega kana yemhuri nhumbi. Kune rimwe divi, iwe haugone kukanganwa kuti ese mashandiro aya ane akateedzana engozi dzaunofanirwa kufunga nezvazvo kubva zvino zvichienda mberi.
Kana iwe ukatevera aya matipi, hapana mubvunzo kuti mari dzako dzinozoitwa zviine hukuru vimbiso dzebudiriro. Saka kuti nenzira iyi, iwe uri mune yakanakisa mamiriro ekuti ubate mari yako nenzira yakanakisa. Kana zvimwe kana zvishoma, nekuti pakupedzisira iri mari.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Zvinotangira kuisa mari yako
Bhizinesi manotsi: investa zvakanyanya kubatsira